Iyo semantic kusagadzikana muvakuru: dzidziso uye yemahara kurovedza muviri | Kudzidziswa Kwekuziva
Kazhinji tinowanzo funga nezve lexicon uye semantics sezvinhu zviviri zvakafanana, kana zvisina kufanana. Muchokwadi, nepo duramazwi tichigona kuzvifungidzira seye seti ye "mazwi emazwi" ayo isu tinonamatira kune ese chiito, chinhu kana zvimwe, semantics inotamba yakadzama chikamu, uye ine basa reiyo interface pakati pemutauro nenzira yedu yekuronga ruzivo.
Zvinoenderana nedzimwe dzidziso, tinogona kusimbisa musiyano uripo pakati pezvinhu zviviri (semuenzaniso, mhuka mbiri) pahwaro hwezvimwe zvinhu kana kana: shumba inodya nyama, nzou inodya sora, huku ine makumbo maviri, shiri dzinobhururuka. Tinogona kugovera zvienzaniso nezvakawanda zvinoenderana kune imwechete uye zvakafanana chikamu (shumba nenzou, kunyangwe paine misiyano, zvirokwazvo vane hunhu hwakafanana kune mumwe nemumwe pane nesando). Iyi dzidziso yakagadziridzwa pamusoro pemakore, zvakare tichifunga nezvekuti, sezvakaratidzwa, hatifunge nhengo dzese dzechikwata nenzira imwechete (hangaiwa, semuenzaniso, inowirirana zvakanyanya neboka re "shiri" kupfuura penguin. ); izvi zvakakonzera kukura kwechirevo che prototyping, Ndicho chokwadi chekuti mukati mechikamu chimwe nechimwe mune zvienzaniso zvinomiririra kupfuura vamwe.
Mu aphasias hazvisi zvakajairika kuwana iyo semantic nyonganiso iri yoga. Pane kupokana, zvinogona kuitika izvozvo chokwadi dementias ivo vanotanga chaizvo nekudzikira kwesemantic system: mune ino nyaya mutauro unogona kuve wakarurama kubva pakuona kwemaungira uye chimiro chegrama, asi murwere anogona kutungamirirwa kuita semantic paraphasias, kuvhiringidza, semuenzaniso, "banga" ne "forogo" kana kushandisa chikamu chepamusoro se "mhuka" ye "imbwa". Kubva pakuona kwekuona, zvinogona kuitika kuti varwere ava vanokwanisa kushandisa zvinhu zvavakajaira (senge foni yavo), asi izvo haikwanise kuwedzera maitiro aya kuzvinhu zvakafanana, asi nyowani (kunge foni nyowani). Mushure mezvose, chikonzero nei uropi huchironga ruzivo muzvikamu zviri chaizvo kuita zvakajairika maitiro, semuenzaniso fuggire pamberi pezvose zvinodya nyama o mangiare pamberi pezvese zvinodyiwa.
Yakawanda semantic system yekugadzirisa zviitiko zvinosanganisira kurovedza muviri mu kupatsanura, tsvaga anopinda e izwi-nhamba kuenzanisa. Heano mamwe emabasa edu emahara.
Inotapira / haina kutapira: mumapoka - Chokwadi nhema - Tsvaga anopindira
Chibereko miriwo: mumapoka - Chokwadi nhema - Tsvaga anopindira
Tinodya / hatidye: mumapoka - Chokwadi nhema - Tsvaga anopindira
Zhizha / Nguva yechando: mumapoka - Chokwadi nhema - Tsvaga anopindira
Ichokwadi-nhema mibvunzo: Abbigadorso - Pets - Nzira dzekutakura - Zvinhu
Ronga: Mhuka (diki-hombe) - Zvibereko nemiriwo (diki-hombe) - Kutakura (kunonoka-kutsanya) - Zvinhu (zvinowedzera kugona-zvishoma kugona)
aphasia, Kurohwa, duramazwi, semantics, semantic kurapwa
Iyo semantic kusagadzikana muvakuru: dzidziso uye yemahara kurovedza muviri2020-09-192020-12-28http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/09/trattamento-semantico.jpg200px200px
Telerehabilitation yekutaura pathologies mune vakuruaphasia
Zvimwe zvekufungisisa, semurapi wekutaura, pabhuku "Izwi roga roga randaiziva" naAndrea VianelloAphasia, Ongororo